हाम्रो आफ्नै जनसत्ता छ कर नबुझाउनेलाई कारबाही गर्छौ — Bhugolnews
नेकपा इन्चार्ज ज्वाला
अर्धभूमिगत रुपमा सञ्चालन भइरहेको विप्पलव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले यही मंसिर ८ गते काठमाडौंमा खुल्ला जनसभाको आयोजना गर्ने घोषणा गरेको छ । सरकारले नेकपाका नेतालाई व्यापक धरपकड गरेपछि पार्टीका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द (विप्लव) सहति जिल्ला तहका नेताहरुपनि सार्वजनिक रुपमा भेटिदैनन् । सरकारले वार्ताको आव्हान गरेसँगै नेकपाले काठमाडौंमा शक्ति प्रर्दशन मार्फत् पार्टीको धारणा सार्वजनिक गर्दैछ । गोप्य रुपमै भएपनि अहिले सभाको तयारीमा जिल्लाजिल्लामा नेता तथा कार्यकर्ता खटिएका छन् । पार्टीले घोषण गरेको जनसभा र पार्टीको क्रियाकलाप, भावी योजना, सरकारप्रतिको धारणालगायतका विषयमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी मकवानपुरका इन्चार्ज वीरबहादुर घलान (ज्वाला) सँग भूगोल न्यूजका सम्पादक ध्रुव अधिकारीले गरेको कुराकानी ।
१) नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (विप्लव नेतृत्व) को अहिले के–के अभियान सञ्चालन भइरहेका छन् ?
२) पार्टीको पुर्नस्थापना दिवस मनाउने भन्नुभयो तपाईहरु भूमिगत रुपमा पार्टी सञ्चालन गरिरहनु भएको छ । सरकारले तपाईहरुलाई धरपकड, गर्ने पक्राउ गर्ने काम गरिरहेको अवस्थामा काठमाडौंमा खुल्ला सभा चाहिँ सम्भव छ ?
हामी भूमिगत पनि छैनौं, गोप्य पनि छैनौँ । हामी जनताको बीचमा छौँ । हामी यही समाजमा छौँ । यही समाजको विकृती, विसंगती भ्रष्टाचार अन्याय अत्याचारको विरुद्धमा हामी लडिरहेका छौँ । र यसो हुँदा यो देशको सामाजिक पुँजिवादी सरकारले हामीप्रति जुन किसिमको व्यवहार गरिरहेको छ । यो उनीहरुले भन्दै आएको लोकातान्त्रिक मान्यता विपरीत पनि छ । हामीले शान्तिपूर्ण आन्दोलन, शान्तिपूर्ण सभा, शान्तिपूर्ण नारा जुलुस, शान्तिपूर्ण भित्ते लेखन गर्दा, उनीहरुले हामीलाई प्रतिबन्ध जस्तो, संकटकाल झल्कने खालको व्यवहार गरेर नेता कार्यकर्तालाई दुःख दिइरहेको छ । यो प्रति हाम्रो पार्टीले घोर भत्सर्ना गर्दै आइरहेको छ । हामी जनताका बीचमा हुँदा, कसरी कहाँकहाँबाट जान्छ भन्ने होइन । त्यो कार्यक्रम चाहिँ जनताको बीचमा , जनता लगेर गर्छौ । हाम्रो सन्देश जनतालाई दिनको निम्ति, र पार्टी पुर्नस्थापना दिवसलाई पनि सफल बनाउनको लागि, हाम्रो पार्टी कस्तो बनाउने ? हामीले कस्तो नीति लिने भन्नका लागि काठमाडौमै खुल्ला सभा आयोजना गरिएको हो ।
३) अहिले सरकारले वार्ताको आव्हान गरेको छ । नेकपा र सरकार बीच वार्ता भएको छ कि छैन ?
अर्को चाहिँ, वार्ता भनेको आधिकारिक पत्र आउनुपर्यो । वार्ता के–को निम्ति ? वैज्ञानिक समाजवाद आउँछ त्यो वार्ताले ? हामीलाई एमालेमा विलय भएको माओवादी केन्द्र जस्तो बनाउन खोजेको भए त्यो वार्ता हुँदैन । त्यो वार्ताको सार्थक हुन सक्दैन । यो वार्ताले सुकुम्वासीको समस्या हल हुन सक्छ ? राष्ट्रियताको समस्या हल हुन सक्छ ? सीमा समस्या हल हुन सक्छ ? असमान सन्धीहरु खारेज हुन सक्छ त ? यो कुनै तर्क छैन, ऐजेण्डा छैन । वार्ता के–का लागि ? यो षड्यन्त्र मात्र हो ।
४) भनेपछि राज्यले साँच्चिकै वार्ताका लागि आव्हान गर्यो नेकपा जाँदैन भन्न खोज्नु भएको हो ?
५) हिजो तपाइँहरुलाई देश परिवर्तनको आन्दोलनमा लगाउने नेतृत्वहरु अहिले सत्तामा छन् । त्यहीबाट अलग भएर तपाइँहरु देशको मुहार परिवर्तन भएन भनेर फेरि अर्को क्रान्तिको आव्हान गरिरहनु भएको छ । देशमा फेरि अर्को क्रान्ति आवश्यक छ र ?
६) फेरि देशमा क्रान्ति गरेर मुलुकमा परिवर्तन कसरी सम्भव छ ? नेकपाले बनाएको योजनाले सहज र सरल रुपमा जनताको मुहारमा परिवर्तन आउँछ ?
७) तल्लो तहमा बसेर काम गरिरहनु भएको छ । तपाईँहरुको पार्टीप्रति जनताको कस्तो खालको धारण पाउनु भाएको छ ? जनताले तपाईंहरुलाई किन विश्वास गर्ने ?
जनताले हामीलाई फुल सपोर्ट गरेका छन् । जनताको सपोर्ट नभएको भए, सरकारले पुरै शक्ति लगाएर, करोडौँ खर्च गरेर हाम्रो नेता कार्यकर्तालाई किन खोज्नु पर्यो । यो ब्रम्हलुट नै गर्यो । जनताले तिरेको करको दुरुपयोग गर्यो । र पुरै शक्ति लगाउँदा पनि हाम्रा पुरै नेता कार्यकर्ता समातेन नि त ? समातेको पनि छुटाउनु पर्यो नि त ? जनताको चाहिँ हामीलाई सपोर्ट छ , राम्रो सम्बन्ध र नङ र मासुको सम्बन्ध छ । हामी यो प्रक्रिया भएपछि जनताकै माझमा छौँ । भूमिगत छैनौँ ।
८) सरकारले तपार्इँहरु हिंसात्मक गतिविधिमा, चन्दा असुली गर्ने क्रियाकलापमा सक्रिय छ भन्ने आरोप लगाएको छ नि ?
यो देश लुट्ने नेताहरुको मोाटमोटी व्यक्तिगत रुपमा हेर्न हो भने पनि शेरबहादुर देउवाको ४५ सय करोड, प्रचण्डको २५ सय करोड, केपीको १५ सय करोड छ भन्ने सुनियो । मिडिया मार्फत्बाट, सामाजिक सञ्जाल मार्फत् । यसो हेर्दा उनीहरुको पैसा कहाँबाट आउँछ त ? उनीहरुले देश लुट्ने, सिमा बेच्ने, नदी बेच्ने, हाम्रा युवाहरुलाई बेच्ने, देशलाई कंगाल बनाउने । उनीहरुले लुटिरहेको छ । यो व्यवस्था ठीक छैन, भन्ने अभियानमा जाँदा हामीले सहयोग लिएका छौ । तर, हामीले उहाँहरुलाई जर्बजस्ती गर्ने हिसाबले, आतंकित हुने हिसाबले गरेका छैनौँ । र हामीले के भनेका छौँ भने, राष्ट्रियताका निम्ति सहयोग गर्नुहोस् । हामी त्यो अभियानमा छौँ ।
यो सुगौली सन्धीको निरन्तरतालाई तोड्न नसक्ने हाम्रो नेताहरु अहिलेसम्म जन्मियो र त्यो तोड्न सक्ने जुन अंग्रेजको पालामा भएको थियो । अंग्रेजले छोडेपनि, इस्ट इन्डियन कम्पनिसँग भएको अर्को १८१६ को सुगौली सन्धीलाई पछिल्लो १९५० को इन्डिया र नेपालबीचको सन्धीलाई तोड्न नसक्ने नेता मात्रै जन्म्या छन् । त्यो सन्धीलाई तोड्नको निम्ति अब यो अभियान, हाम्रो विप्लव कम्रेडसहितको नेकपाले सक्छ । त्यो अभियानमा सहयोग गरिरहहनु भाछ । र हाम्रो अर्को सरकार, सत्ता छ । हामीले हिजो जनयुद्धमा गुमेको सत्ता फिर्ता गर्दैछौँ । र त्यस कारणले अब सत्ता आएपछि त्यसलाई करको दायरामा पनि ल्याउने हुन सक्छ । त्यो प्रक्रियामा अगाडि बढिरहेका छौँ । यसलाई चन्दा भन्न मिल्दैन । सहयोगको रुपमा । अर्कोचाहिँ हाम्रो सत्तालाई कर बुझाउने कि नबुझाउने त ?
९) तपाईहरुले पनि छुट्टै सत्ता घोषणा गरेर कर लिन थालेपछि त्यसको प्रत्यक्षमा मारमा सर्वसाधारण र उद्योगी व्यवसायी पर्ने भए नी ? अब कर सरकारलाई तिर्ने कि नेकपालाई ?
सर्वसाधरण पर्दैनन् । अर्को त के भन्छ भने, कर किन दिने ? अहिले पछिल्लो चरणमा दोहोरो तेहोरो कर परिराछ । यो चाहिँ के हो त ? उनीहरुलाई मार पर्दैन ? कर किन दिने ? कर लिनको निम्ति जनतालाई केही दिनुपर्छ । उसले राम्रोसँग खानपान दिन सकेको छैन । बाटो दिन सकेको छैन, उसले आवासको व्यवस्था गर्न सकेको छैन । जनतालाई के दिएको छ त ? कंगाल बनाउने मात्रै ? हामीले यो प्रक्रियालाई तोड्नुपर्छ भनेर काम गरेका छौँ । हाम्रो सत्ता निर्माण गर्न, हाम्रो विचार रक्षा गर्नको निम्ति पनि यो आवश्यक छ । अर्को त राष्ट्र निर्माण गर्नको निम्ति हामीले त्यो अभियान जरुर गर्नुपथ्र्यो । खुसिको कुरो जनयुद्ध पछि हाम्रो सत्ता ब्युँझिएको छ । अब यसले आफ्नो आकार लिन्छ । सम्पूर्ण व्यवसायीहरुलाई के भन्छु भने, तपाईँहरु आतंकित हुनुपर्दैन । तपाईँहरुबाट दिने कर, सहयोग खेर जान जाँदैन । राष्ट्रको निम्ति रगत बगाएर बलिदान दिएर हामी पुरा गछौँ । अर्को तपाइँहरुका लागि हामी अभियानमा छौँ । लडाईँमा छौँ । तपाईँहरुको ढुक्क भएर जनसत्ताको करको दायरामा आउन अनुरोध गर्छु । पुरानो सत्ताले भनेको जस्तो, बिग मिडियाले भनेको जस्तो हामी आतंककारी होइनौँ । हामी राजीनितक क्रियाकलाप गर्ने कार्यकर्ता हौँ । राजनीतिक विचार बोक्ने कार्यकर्ता हौँ । र वैज्ञानिक समाजमा सबै मान्छेलाई धनी बनाउने, सबैलाई सुखि बनाउने अभियानमा छौँ । त्यसैले सबैलाई अुनरोध गर्छु, तपाईँहरु आतंकित नहुनुस् । हामीलाई सहयोग गर्नुहोस् । तपाईँहरुको यसैमा जीवन छ , यसैमा रक्षा छ । नत्र, २–४ जना घरानी पुँजीहरुले, राष्ट्रिय पुँजीहरुलाई ध्वस्त बनाउदैछ । तपाईँहरुको रक्षाको निम्ति पनि बैज्ञानिक समाजवाद जरुरी छ । त्यसैले सबैलाई अनुरोध गर्छु ।
१०) अहिलेको राज्य सत्तासँग तपाईंहरु कसरी प्रस्तुत हुनुहुन्छ ?
हामी शान्तिपूर्ण ढंगले जनताको बीचमा छौँ । हाम्रो दृष्टिकोण, भिजन जनतालाई सेवा गर्ने, राष्ट्रलाई सेवा गर्ने हिसाबले अगाडि बढिरहेका छौँ । तर, शान्तिपूर्ण कार्यक्रमहरुलाई धरपकड गर्ने, झुटा मुद्दा लगाउने, । प्रवक्ता कम्रेडलाई समातेपछि ४३ वटा मुद्दा लगाइयो । तर, एउटै पुष्टि नहुने मुद्दा किन लगाको त ? भनेपछि यस्तो बेइज्जती सरकार, यस्तो गैरलोकतान्त्रिक सरकार, के जनताको सेवा गर्न सक्छ ? हामी के भन्छौँ भने, शान्तिपुर्ण तरिकाले जनतालाई एकिकृत गर्ने अभियान चलाइरहेका छौँ । तर, यो अभियानमा दमन गर्ने, हत्या गर्ने, झुटा मुद्दा लगाउने, हाम्रा मान्छेलाई बेपत्ता बनाउने , जुन किसिमले शान्तिपुर्ण कार्यक्रम पनि गर्न नदिने भयो भने चाहिँ , त्यहाँ बल प्रयोगको सिद्धान्तमा आउन सक्छ । आउन सक्छ होइन आउँछ नै । माक्सले भने अनुसार, उसलाई अन्याय पर्यो भने बिद्रोह गर्ने अधिकार पनि छ । हामीले भन्दै आएका छौँ पनि हामी त्यो लागू गर्छौँ । उनीहरुले हामीलाई दमन गर्ने, उनीहरुले बन्दुक प्रयोग गर्ने, बम प्रयोग गर्ने, लाठी प्रयोग गर्ने भयो भने लाठीको बदला हामी लाठी प्रयोग गर्छौँ । विचारको बदला विचार प्रयोग गर्छौँ । र हाम्रो अभियान रक्षाको निम्ति, वैज्ञानिक समाजवादको बाटो अगाडि बढ्नको निम्ति काँडाहरु छ भने हामीले हतियार प्रयोग गर्नुपर्ने हुन सक्छ । तर कुन बाटो हिँड्ने भन्ने चाहिँ सरकारकोे कोटमा छ । हामी शान्तिपुर्ण तरिकारले अगाडि बढ्न चाहिरहेका छौँ । तर, उहाँहरुले बल प्रयोग गर्छ भने, हामी चुप बस्दैनौ ।